Amabhothi Omculo Ahamba Phambili e-Discord - VidaBytes | I-LifeBytes
Amabhothi Omculo Ahamba Phambili e-Discord
U-Iris Gamen | 11/06/2022 20:00 | Izinhlelo
Uma ucwiliswe emhlabeni we-Discord, futhi uzwa sengathi izingosi zakho zezingxoxo seziyisicefe, lokhu okuthunyelwe kuzoba nentshisekelo kuwe kusukela manje. sizokhuluma ngama-bot omculo ahamba phambili e-Discord. Bonke abasebenzisi bale seva bafuna ukunikeza isiteshi sabo ukubukeka okuyingqayizivele, futhi kumane nje kuyindaba yokwazi ukuthi yiziphi izinsiza ezingcono kakhulu zaso.
Le nkundla, ikunikeza ithuba lokukwazi ukudala isikhala ngokuthanda kwakho, yengeza izakhi ezihlukile ezenza kube okomuntu siqu. Ungakha iziteshi, amaseva futhi uthuthukise ama-bots akho ngokuya ngokuthanda kwakho.
I-Discord, isiphenduke enye yezinkundla ezibaluleke kakhulu zemiyalezo eku-inthanethi. Kunezinhlobonhlobo eziningi zama-bots ongawengeza kule nkundla, ezingasukela kulezo ezihloselwe ukulinganisa izingxoxo, kuya kulabo umsebenzi wabo oyinhloko uwukujabulisa, njengama-bot omculo. Asikuletheli nje kuphela iqoqo lama-bot omculo ahamba phambili, kodwa kulabo abangayazi i-Discord sizophinde sikhulume ngayo.
1 Ukungezwani; iyini futhi inamiphi imisebenzi
2 Ayini ama-bots ku-Discord?
3 Amabhothi Omculo Ahamba Phambili e-Discord
Ukungezwani; iyini futhi inamiphi imisebenzi
Impela uma uhlobene nezwe labadlali bamageyimu, uzokwazi le nkundla ngokuphelele. Njengoba, inomsebenzi wokuhlela, ukuhlangana nabantu abasha nokuxhumana nabangane bakho. Imayelana uhlelo lokusebenza lokuxoxa olufana nezinye izinkundla ezinomsebenzi ofanayo.
Empeleni, ihloselwe abasebenzisi ngaphakathi kwe umhlaba wemidlalo, lapho bengahlangana khona, baxhumanise indlela yabo yokudlala nokukhuluma ngenkathi bedlala umdlalo. Ayisetshenziswa abadlali bamageyimu kuphela, kodwa futhi nayizinkampani ezithile ezinabasebenzi abaningi.
Ukwazi ukuxhumana ngalolu hlelo lokusebenza kuyinqubo elula kakhulu, ngaphezu kokukunikeza imisebenzi ehlukahlukene yosesho ukuze uthole umuntu othize futhi ngaleyo ndlela ukwazi ukumengeza ohlwini lwakho lokuxhumana. lesi sigcawu Kungachazwa ngamagama amabili, inhlangano kanye nokuxhumana.
Njengoba sesishilo, amaseva amaningi kule nkundla ahlobene nomhlaba wemidlalo yevidiyo, kodwa futhi ungathola amaseva ahlukene lapho kuxoxwa ngezinye izihloko njenge-anime, ezomnotho, impilo yengqondo, noma ukuhlangana nabantu abasha nokwenza abangani abasha.
Ukungezwani, iphuma phambili kwezinye ngezinhlobonhlobo zayo zezingxoxo ezibanzi. Futhi, ayinensisi igeyimu ngenkathi uku-inthanethi ukhuluma nabangane bakho noma ozakwenu beqembu. Ngenxa yokwakhiwa kwezindima ngaphakathi kweseva, ungaphatha futhi ulinganise okwenzeka kuseva uma umdali oyinhloko engekho.
Ayini ama-bots ku-Discord?
Amabhothi ku-Discord, izinhlelo umsebenzi wazo uwukwenza umsebenzi ngokuzenzakalelayo. Le misebenzi ingasukela ekudlaleni umculo iye ekusebenzisaneni okulula phakathi kwabasebenzisi beseva.
Kuya ngokuthi yini ofuna ukuyifinyelela, kufanele ufake i-bot ethile. Lezi zinhlelo ezincane bazokusiza ukuthi uzikhulule kuleyo misebenzi eyisicefe kakhulu. Kumele zilungiswe ngendlela yokuthi ngesikhathi sokusebenza kwazo zihambe ngendlela efanele.
Kusukela lapha, sikweluleka ukuthi ungangezi ama-bots ngaphandle kokulawula, kungcono ukuthi uzinike isikhathi ukuze uthole leyo evumelana kangcono nezidingo zakho. Ngokwenza lesi sinqumo, uzogwema izinkinga kanye nokudideka okungenzeka phakathi kwabasebenzisi.
Lolu hlobo lwe-bot lubalulekile kunoma iyiphi iseva ye-Discord. Nabo, uzokwazi ukudlala umculo ozozwakala yiwo wonke amalungu eseva, ivula imiyalo ethile kuphela.
Ngenani elikhulu lama-bots emakethe ngale njongo, akulula ukuthola ukuthi iyiphi ozonikeza imiphumela engcono kakhulu. Ngakho-ke, kulokhu okuthunyelwe sikunikeza umhlahlandlela onemininingwane kokunye okungcono kakhulu.
Enye ye ama-bots okudlala umculo aphelele futhi adumile phakathi kwabasebenzisi beDiscord. Izokuvumela ukuthi udlale umculo ovela ezinkundleni ezahlukene njenge-YouTube, Vimeo, SoundCould, njll., njalo unekhwalithi yomsindo ehamba phambili futhi mahhala ngokuphelele.
Futhi ikunikeza ikhono lokudala uhlu lwadlalwayo olungokwezifiso. Engeza, ehambisana nezinkundla zomculo ezisakazwayo njenge-Twitch.
Enye i-bot yomculo enamandla kakhulu, enezinhlobonhlobo zemisebenzi. Ngephaneli yokulawula uzokwazi ukumisa imisebenzi ehlukene eyenziwe yasebenza noma imiyalo ofuna ukuyenza ngendlela oyifisayo. Ngaphezu kwalokho, inemisebenzi yokukwazi ukulinganisa, ukuthulisa noma ukuvimba okwesikhashana abasebenzisi abephula noma yimuphi umthetho.
I-bot yomculo yamahhala ye-Discord. Kuhlanganisa imisebenzi efana kakhulu nezinye zalezi zinhlelo ezincane ezifana kungenzeka ukudlala izingoma ezivela kwamanye amapulatifomu njengeYouTube, Twitch, Mixer, Bandcamp kanye nenani elikhulu labasakazi.
Ngezici zayo zokudlala, ungakwazi ukweqela engomeni elandelayo, iluphu, unyakaze, ususe kulayini, njll. Futhi, Chip inenketho yokukubonisa amagama ezingoma ezikhethiwe.
Inhloso enkulu yale bot ye-Discord uku xazulula yonke into ehlobene nokulinganisela, ukuzijabulisa nomculo. Elinye lamaphuzu ayo amahle ukuthi ingeSpanishi, okuzokwenza ukuthi ukuphatha kwayo kubekezeleleke kakhulu kubasebenzisi.
I-Ayana iyi-bot, yenziwe ngendlela oyifisayo ngokugcwele kulokho okudingwa ngumsebenzisi ngamunye. Ngokusebenzisa i-automatisms, uzokwazi ukulinganisa okuqukethwe kweseva. Ineseva yomculo ngokusebenzisa imiyalo kanye nohlu lwadlalwayo lapho ungakwazi ukwengeza izingoma zakho ozithandayo, ukukwazi ukusabela ezingomeni ezidlalwa abanye abasebenzisi.
Kudume kakhulu kulabo abafuna a i-moderation bot, kodwa ngaphezu kwalokho, ingadlala nomculo. Hlaziya izingxoxo ngokuzenzakalelayo eziphakelini ukuze ugweme ukuziphatha okungqubuzana nomthetho. Ngochungechunge lwemiyalo, abasebenzisi abangaziphathanga kahle bangathuliswa noma baxoshwe.
Iyahambisana nezinye izinkundla zomculo njenge-YouTube, i-Twitch noma i-SoundCloud. Engeza, ukuthi i-MEE6 ihlanganisa umdlalo womculo ojabulisayo ongawujabulela nozakwethu weseva yakho, lapho kuzodingeka uqagele khona ingoma neciko elidlalayo.
Ekugcineni, sikulethela lokhu okusha i-bot yomculo ezokuvumela ukuthi ulalele umculo ngoxhumana nabo kwiseva. Kuyalungiseka, okukunikeza amandla okusetha izindima zomdlali, ukususa izingoma eziyimpinda, futhi udale nohlu oluvinjelwe lwesiteshi.
Wonke lawa ma-bot esiwashilo futhi amaningi ayatholakala ukuze alandwe futhi uwafake ku-Discord. Ngayinye yazo izokunikeza uchungechunge lwamathuluzi ahlukene ukuze ungagcini nje ngokulinganisela, kodwa futhi izokwenza izingxoxo zakho zibe indawo enamandla nejabulisayo.
Kuningi ongakuthola mayelana nalolu hlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo, kodwa ngenkathi lokho kwenzeka, yenza iseva yakho ibe umhlaba oyingqayizivele ngokuyenza ngokwezifiso ngama-bots akho owathandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Izinhlelo » Amabhothi Omculo Ahamba Phambili e-Discord
Umphathi wefayela; kuyini, imisebenzi nezinye izindlela